အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ 4Paradigm သည်ဟောင်ကောင် IPO ကို အသစ် ပြောင်း သည် – Pandaily
အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ 4Paradigm သည်ဟောင်ကောင် IPO ကို အသစ် ပြောင်း သည်
Feb 24, 2022, 18:46ညနေ 2022/02/24 23:28:05 Pandaily
ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) ၏အဆိုအရ တရုတ် အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. (4Paradigm) သည် နောက်ဆုံး သတင်း ဖြစ်သည်၎င်း၏ အလားအလာGoldman Sachs နှင့် CICC တို့၏ ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များအရ ကုမ္ပဏီသည် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ပင်မ ဘုတ် အဖွဲ့တွင် လူသိရှင်ကြား စာရင်းဝင် လိမ့်မည်။
IPO မှရရှိသော အသားတင် အမြတ် သည် အခြေခံ သုတေသန၊ နည်းပညာ စွမ်းရည် များနှင့် ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်ကုန်များ တိုးချဲ့ ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း သစ် များသို့ ၀ င်ရောက် ခြင်း တို့အပါအ ၀ င် ၎င်း၏ အတု ထောက်လှမ်းရေး ပလက်ဖောင်း တွင် အဓိကအားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိမ့်မည်ဟု အလားအလာ ကဖော်ပြသည်။
တကယ္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္၊4Paradigm သည်ဟောင်ကောင် စတော့ ဈေးကွက် အရာရှိ များထံ အလားအလာ ကိုတင်ပြ သည်သို့သော် ၆ လအတွင်း ကြားနာ မှု မအောင်မြင် သောကြောင့် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် 4Paradigm ၏ IPO လျှောက်လွှာ အဆင့်အတန်း ကို “ မမှန် ကန်” ဟုသတ်မှတ် ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ကုမ္ပဏီက “ စာရင်း လုပ်ငန်းစဉ် သည်ပုံမှန် တိုးတက် နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိတွင် ပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင် နေသည်” ဟု တုံ့ပြန် ခဲ့သည်။
4Paradigm ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့် AI နည်းပညာ ကိုအာရုံစိုက် ခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်း ဗဟိုပြု AI ဖြေရှင်း ချက်များ ကိုထောက်ပံ့ပေး ခြင်းအားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များသည် AI ၏ အကြီးစား နှင့် လျင်မြန်စွာ အသွင်ပြောင်း မှု ကိုနားလည်သဘောပေါက် ပြီး သူတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ နိုင်စွမ်း ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ 4Paradigm သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ပလက်ဖောင်း ဗဟိုပြု ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့် AI နည်းပညာ ပံ့ပိုး သူဖြစ်ပြီး ဈေးကွက် ဝေစု ၁၈. ၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်ဟု China Insights Consulting မှ သိရသည်။
၎င်း ၏နောက်ဆုံး အလားအလာ အရ ကုမ္ပဏီသည် ဘဏ္ finance ာရေး၊ လက်လီ ရောင်းဝယ် မှု၊ ကုန် ထုတ်လုပ်မှု၊ စွမ်းအင် နှင့် စွမ်းအင်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စသည့် စက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် Fortune 500 မှ စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ ၅၅ ခုကို ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။ ကော်ပိုရိတ် ဖောက်သည် အရေအတွက်သည် တစ်နှစ်လျှင် ၈၂. ၄% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၁၈၆ အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
ဖောက်သည် များ တိုးပွား လာသည်နှင့်အမျှ 4Paradigm သည် တစ်နှစ် ပြီး တစ်နှစ် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွား လာသည်။ ၂၀ ၁၈၊ ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ တွင် ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၁၂၈ သန်း (ဒေါ်လာ ၂၀. ၂ သန်း) ၊ ၄ ၆၀ သန်းနှင့် ၉ ၄၂ သန်း အသီးသီးရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ သုံးလပတ် အတွက် ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၃၄. ၃% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယွမ် ၁. ၃ ၄၅ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တစ် နှစ်လုံး ထက်များစွာ ကျော်လွန် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Artificial Intelligence Startup 4Paradigm ဟောင်ကောင် IPO ကမ်းလှမ်း မှု သည်မ မှန်ကန် ပါ
အရှုံးပေါ် မှု အနေနဲ့ကတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပထမ သုံးလ ပတ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမ သုံးလ ပတ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပထမ သုံးလ ပတ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမ သုံးလ ပတ်၊ ရှယ်ယာ တွေကို အခြေခံ တဲ့ ငွေသား မဟုတ်တဲ့ လျော် ကြေးငွေ တွေရဲ့ ဆိုးကျိုး တွေကို နုတ် ယူပြီး ချိန်ညှိ ထားတဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အရှုံး ဟာ ယွမ် ၂ ၁၃ သန်း၊ ယွမ် ၃ ၁၈ သန်း၊ ယွမ် ၃ ၈၆ သန်း နဲ့ ယွမ် ၃ ၉၁ သန်း အသီးသီး ရှိပြီး တိုးချဲ့ တဲ့ လမ်းကြောင်း သစ် ကိုပြသ နေပါတယ်။
Sina Technology ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ ဟောင်ကောင် IPO အရ 4Paradigm သည် ရန်ပုံငွေ ၁၂ ကြိမ် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ April ပြီ လတွင် C + အလှည့်ကျ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၃၀ ရရှိ ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ သည်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိသည်။ ထို့နောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ ထပ်မံ ရရှိခဲ့သည်။ IPO မတိုင်မီ ကုမ္ပဏီ ၏တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
4Paradigm သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင်တရုတ် စက် သင်ယူမှု ပလက်ဖောင်း များတွင် စျေးကွက် ဝေစု နံပါတ် တစ် ဖြစ်သည်
IDC သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် အတွင်း AI ဈေးကွက် ဝေစု အစီရင်ခံစာကို မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Machine Learning အမျိုးအစား တွင်တရုတ် AI startup 4Paradigm သည် စတုတ္ထ နှစ် ဆက်တိုက် စျေးကွက် ဝေစု အများဆုံး ရရှိခဲ့သည်။
Artificial Intelligence Startup 4Paradigm ဟောင်ကောင် IPO ကမ်းလှမ်း မှု သည်မ မှန်ကန် ပါ
HKEx ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် က အင်္ဂါနေ့က တရုတ် အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ 4Paradigm မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် တင်သွင်း ခဲ့သော IPO လျှောက်လွှာ သည် ခြောက် လအတွင်း ကြားနာ မှု မအောင်မြင် သောကြောင့် ပျက်ပြယ် ခဲ့သည်။
Links Doc ဟာ ဟောင်ကောင်မှာ ပထမဆုံးလူသိရှင်ကြား ရှယ် ယာ ၂ – ၃ သန်းကို ရှာဖွေနေ
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေဒတာပလက္ေဖာင္းကုမၸဏီ LinkDockTechnology Limited က ေထာက္ပံ့သည့္ Alibaba Group သည္ လာမည့္ေဟာင္ေကာင္ IPO တြင္ ဦးေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မတိုင္မီ သန္း ၂၀၀ မွ သန္း ၃၀၀ ဝန္းက်င္ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။
Startups Sep 09 စက်တင်ဘာ 10, 2021